सिरिन्ज आक्रमण भनी मिडियामा गलत सन्देश फैलाइयो « Pokharaaaja
प्रकाशित मिति : 19 July, 2019 7:20 pm
( महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाण्डौँका प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहसँग पोखरा आजले लिएको अन्तरवार्ता)
अहिले सिरिन्ज आक्रमणको जनतामा जुन त्रास फैलिएको छ, यसको बारेमा केहि बताइदिनुहोस् न
मिडियामा सिरिन्जको सम्बन्धमा जसरी बाहिर आयो, वास्तवमा त्यो गलत कुरा हो । किनभने सिरिन्ज आतंक भनेर मिडियाले कुरै नबुझेर र प्रहरीसँग जानकारी नै नलिएर सन्देश फैलाए । हामीले त्यो व्यक्तिलाई समातेर कारबाही पनि गरिरहेका छौँ । त्यो सिरिन्ज नभएर ढलान किल्ला हो र उसले बाइकमा गएको बेला घोच्ने गरेको पाइएको छ ।
किन त्यस्तो गरेको उसले?
उसको भनाइअनुसार सुरुमा त्यसो गरेपछि मिडियामा आयो र त्यसपछि त्यो अझै उत्तेजित भएर आक्रमण गरेको देखियो । त्यस्तो गर्ने सहि मानसिकता भएको व्यक्ति भन्ने मलाई लाग्दैन । उसलाई हामीले कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गरिरहेका छौँ ।
त्यसो भए एच.आइ.भी. संक्रमित सिरिन्ज आक्रमण गरेको होइन?
होइन । त्यो गलत कुरा हो । अहिले जुन हिसाबको सन्देश बाहिर गइरहेको छ, त्यो गलत सन्देश हो । वास्तविक घटना के हो त्यो प्रहरीसँग बुझेर जाँदा राम्रो हुन्छ तथ्य कुरा नबुझिकन मिडियामा गलत सन्देश जाँदा नराम्रो हुन्छ र अहिले भएको त्यहि हो ।
यसबाहेक अपराधिक गतिबिधिहरु काठमाण्डौमा कत्तिको बढिरहेको छ ?
यस अगाडि काठमाण्डौँमा बैँकिङ कसुरहरुको मुद्दा अर्थात बाउन्स चेकका मुद्दाहरु बढिरहेका थिए, अहिले कम हुँदै छ । अहिले ठगिको मुद्दा, साइबर क्राइम, लागु औषध, अभद्र व्यवहार, महिला हिंसासम्बन्धि मुद्दाहरु बढि आएका छन् ।
लेनदेनका व्यवहारमा पैसा खाएर भागेका घटनाहरुमा पिडितहरु प्रायः प्रहरीकहाँ जाँदैनन् । यस्तो अपराधिहरुसम्म कसरी पुग्नुहुन्छ?
लेनदेनको व्यवहार खासमा प्रहरीले हेर्दैन । यो देवानी प्रवृत्तिको मुद्दा हो । यस्ता मुद्दाहरु लिएर अदालतमा जानुपर्छ ।
अपराधिक क्रियाकलापहरुमा महिला/पुरुष वा कुन उमेर समुहका व्यक्तिहरुको बढि संलग्नता रहेको छ?
अहिले पुरुष/महिलाहरु वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने गरेका छन् । अहिलेका युवा पुस्तालाई परिणाम छिट्टै चाहिन्छ । उनीहरु परिश्रम, दुःख, मेहेनत गर्न चाहँदैनन् र कमाउनको लागि सर्टकट अपनाएर गलत कामहरु गर्ने गरेका पाइएका छन् । यस्ता क्रियाकलापहरुमा किशोर अवस्थाका देखि ३५ वर्ष तलका युवापुस्ताहरु बढि संलग्न भएको पाइएको छ । ठमेल लगायतका क्षेत्रमा हामीले टिनएजरहरु र अण्डरएजकाहरुलाई प्रवेश निषेध गरेका छौँ र १८ वर्षमुनिकाहरुलाई त्यस्ता ठाउँहरुका रेष्टुरेण्ट, नाइट क्लबहरुमा काम गर्नबाट पूर्ण रोक लगायका छौँ । हामीले नियमबिपरित काम गर्ने त्यहाँका कति नाइट क्लब,रेष्टुरेण्टका सञ्चालकहरुलाई पनि कारबाहि गरेका छौँ ।
लागु औषधको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा, भारत र नेपालबिच खुला सिमाना भएकाले बसको रुटमार्फत लागुऔषध भित्रिने गरेको पाइएको छ । भित्रिएका लागुऔषध हामीले धेरै मात्रामा नियन्त्रण पनि गरेका छौँ । जुन हिसाबले म पोखरामा कार्यरत हुँदा लागुऔषध विरुद्धको अभियान चलाएको थिएँ । अहिले नेपाल प्रहरीले अधिराज्यव्यापी ‘समुदाय-प्रहरी साझेदारी’ अभियान चलाएको छ । महिला हिंसा, बालबालिका विरुद्धको अपराध, साइबर अपराध र सडक सुरक्षा सम्बन्धी गरी ४ वटै कुरालाई समेटेर हामी व्यापक रुपमा अगाडि बढेका छौँ ।
अनि लागु औषधको बारेमा कस्तो अभियान चलाउनुभएको छ?
‘ समुदाय-प्रहरी साझेदारी ’ कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीले अधिराज्यव्यापी कार्यक्रम ल्याएको छ । जस्तो महानगर, पालिकास्तरमा हामीले समितिहरु गठन गरी हाम्रो अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरेका छौँ । हामीले १००० भन्दा बढि स्कुलहरुमा प्रशिक्षण गर्ने काम गरिसकेका छौँ । जनता र प्रहरीबिचको दूरी र असमझदारीलाई हटाई राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न र अपराधहरु नियन्त्रण गर्न हामीले स्थानीय तहदेखी पालिका तहसम्म राम्ररी प्रहरीको भूमिका निभाएका छौँ ।
सडक सुरक्षाको बारेमा तपाईँहरुले कस्तो अभियान चलाउनुभएको छ?
धेरै जस्तो दुर्घटनाहरु मापसेको कारणले भएका छन् । हामीले अभियान चलायपछि सडक दुर्घटनाहरु कम भएका छन् । सडकको अवस्था, सवारी साधनको अवस्था, चालकको कामकर्तव्य सम्बन्धि जनचेतना जगाउने र त्यसमा चेकजाँच गर्ने काममा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ । यसले गर्दा पहिलाको तुलनामा अहिले रोड एक्सिडेन्टको संख्या पनि घटेको छ ।
अधिराज्यभरी हेर्ने हो भने सडक सुरक्षाको स्थिति एकदमै नाजुक छ किनभने हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो डिजास्टर भनेको सवारी दुर्घटना हो । यसको कारण ड्राइभरको लापरवाहि, रोडको स्थिति, सवारीसाधनको स्थिति, ट्राफिक नियमको उलंघन लगायत विभिन्न कुराहरुले सडक दुर्घटनाहरु भइरहेका छन् । एक वर्षको डाटा निकाल्ने हो भने सडक दुर्घटना यति ठुलो डिजास्टरको रुपमा देखिएको छ कि जसले गर्दा यसलाई न्युनिकरण गर्न नेपाल प्रहरीले यसलाई मूल एजेण्डाको रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
उपत्यकाको ट्राफिक जामको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न
यहाँ महानगर ट्राफिक महाशाखा छ जसले टोटल ट्राफिक हेर्ने काम गर्छ । यहाँ टोटल ट्राफिक प्रहरीहरु २४ सै घण्टा खटिएका छन् । ट्राफिक जाम हुने धेरै कारणहरु छन् । रोड सानो छ, सवारीसाधन धेरै छन् । ट्राफिक प्रहरी मात्र खटिएर ट्राफिक जामको समस्या हल हुँदैन । यसको लागि टेक्नोलोजीमा आधारित ट्राफिकमा जानुपर्छ । यसको पूर्वाधारहरु तयार गर्नको लागी सरकारले त्यहि हिसाबको स्रोत दिएर त्यहि हिसाबको विकास हुनुपर्छ । विदेशतिर पनि जाम हुन्छ तर त्यहाँ प्रविधिको प्रयोग भएको छ, ट्राफिक लाइटको प्रयोग हुन्छ र नियममा चल्छन् तर हाम्रोमा त्यस्तो प्रविधि छैन ।
महिला तथा बालबालिका सम्बन्धि अपराधहरु नियन्त्रण गर्न तपाईँहरुले केहि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनुभएको छ?
सामान्यतया हेर्दा महिला हिंसाका घटनाहरु यहाँ मात्र नभई अधिराज्यभरी नै भएका छन् । पिडितले समयमै प्रहरीलाई जानकारी गराएको सम्बन्धमा हामीले त्यसमा कुनै पनि सम्झौता नगरीकन हामीले कारबाही गर्छौँ । घरेलु हिंसा, कुटपिटका कुरामा हामीले कुनै कम्प्रमाइज नगरी कारबाही गर्छौँ ।
नेपालमा गरिबीले हो कि के कारणले अपराधिक घटनाहरु बढिरहेका हुन्?
जब मान्छे कुनै पनि काममा संलग्न हुँदैन, अथवा मान्छे बेरोजगारको शिकार बन्छ तब उ अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन जान्छ । मान्छेलाई कुनै न कुनै काम, व्यवसायमा संलग्न गराएर अपराधिक घटनाहरु निर्मुल पार्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
कुन उमेर समूह र कुन ठाउँका मानिसहरु हाम्रो देशमा अपराधिक क्रियाकलापमा बढि सक्रिय छन्?
काठमाण्डौँको कुरा गर्ने हो भने हरेकको हातमा मोबाइल, घरघरमा इन्टरनेट छ । मानिसहरुले इन्टरनेटको प्रयोगबाट सबै कुरा खोज्नेतिर लागेका छन् । यसबाट उनीहरुले आफ्नो अवस्था र अरुको अवस्था दाँज्न पुग्छन् । अरुको अवस्था राम्रो भएको देख्दा आफु पनि त्यहि अवस्थामा पुग्नका लागी ऊ अपराधिक काममा सामेल हुन पुग्छ । त्यस्तै मोटरसाइकललगायत सवारीसाधन चोरी भएको घटनाहरुमा हामीले अभियान नै चलाएर १०० जनाभन्दा बढि चोरहरुलाई नियन्त्रणमा लियौँ । यसमा २५ देखी ३२ वर्षभित्रका व्यक्तिहरुको बढि संलग्नता रहेको र उनीहरु काठमाण्डौँकै र वरीपरिका जिल्लाहरु जस्तै काभ्रे, धादिङ, नुवाकोटका थिए ।
ओलीले हचुवाका भरमा गठन गरेको भूमि सम्बन्धी आयोग देउवाले गर्दिए खारेज
पोखरा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ।
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन
पोखरा मंगलबार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युत प्राधिकरणको पूर्वकार्यकारी निर्देशक
गण्डकी प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ- मुख्यमन्त्री पोखरेल
पोखरा गण्डकी प्रदशेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आतुर रहेको बताएका
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६०९ जनामा कोरोना पुष्टि
पोखरा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको दैनिक कोरोना सम्बन्धी विज्ञप्ति अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा गण्डकीका १ हजार